Saturday February 10, 2018 - 15:55:56 in Wararka by Shaqaalaha Burcoonline News
Hargeisa (Burcoonline) 10.02.2018 Murashaxii KULMIYE Madaxweyanaha hadda ee Somaliland wuxuu ku ololeeyay saraynta sharciga, shakhsi go’aan adag dooro iyo qodobo kale oo mala awaal aha..Ilaa hadda intaan hayo anigu sarayn sharci iskadaayo hoos u dhigida sharciga ayaa socoto. Madaxweyanaha qodob Dastuuri ah aya siinaya awooda magacaabista iyo xil ka qaadistaba.
Maxamed Cali Bile wuxuu Madaxweyne Muuse Biixi u magacaabay Chief of Cabinet-ka Madaxtooyada, Ummadda looma soo bandhigin magacaabistiisi waanu shaqaynaaya. Waa xil culus oo horena inoo soo maray Xirsi Cali Xaji Xasan ayaa xilkan mar hayay muran badan oo uu dhaliyayna Wasiirka Madaxtooyada ayaa loo badalay . Dood badan oo laga yeeshay waxa dhammaan shaqaalaha Madaxtooyada lagu amray inay ka amar qaataan, haddii la waydiiyo xilkiisana waxay ku sheegayaan La-taliyaha gaarka ah ee Madaxweyanaha. Waan hubaa Saxaafaddu haday Muuse Biixi waydiiso wuxuu ku jawaabi doona "Maxamed Cali Bile waa la-taliyahayga”.. Runtuse waa Chief of Cabinet-ka Madaxtooyada .. Xitaa inuu la-taliye u yahay Shacbiga xasaanada Madaxweyne uu ugu dhaartay looma soo bandhigin...... Maruu ka hadlaayay Toronto Canada oo uu safar ku joogo wuxuu cadeeyay inuu Xukuumadda la shaqeeyo lakiin xilkiisa muu soo bandhigin.